सावधान ! आल्मुनियममा भुलेर पनि नगर्नुस् खाना प्याक !
Tuesday 25th January 2022 | मङ्गलबार, माघ ११, २०७८
बालबालिकालाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन माघ १५ गतेदेखि ५ दिन विद्यालय खुल्ने
२०७८ माघ ११, मङ्गलबार
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति यथाशीघ्र तोक्न नेपाल सरकारलाई निर्वाचन आयोगको आग्रह
कोरोना संक्रमणको ‘हटस्पट’ बन्दै काठमाडौँ उपत्यका : थप ६ हजार १७२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
सिटामोल सहज उपलब्ध गराउन सातै प्रदेशका सरकारलाई सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
‘नो खोप कार्ड, नो सर्भिस’ : ‘नो मास्क, नो इन्ट्री’
प्रकाशित: २०७८ असाेज ६, बुधबार
आल्मुनियमको फाइल सहरी जीवनको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्दै छ । यसलाई खाना, तरकारी, मासु वा अन्य खाद्यपदार्थ प्याक गर्न प्रयोग गरिन्छ । मानिसको व्यस्त जीवनमा समय बचतका लागि पनि यस्तो गरिन्छ ।
किनभने, मानिसलाई भाँडा माझ्ने फुर्सद पनि छैन ।तर, लामो समयसम्म आल्मुनियममा खाना राख्दा खाना खराब मात्र हुँदैन, पोषण तत्व पनि उडेर जान्छ । यसको कम प्रयोगले स्वास्थ्यमा त्यति धेरै असर नपार्ने भए पनि बढी प्रयोग भने हानिकारक मानिन्छ ।
विकासशील मुलुकमा आल्मुनियमको अत्यधिक प्रयोग गरिन्छ। आल्मुनियमको भाँडामा खाना पकाउँदा त त्यति धेरै असर गर्दैन तर आल्मुनियम फाइलमा खाना प्याक गर्नु भने स्वास्थ्यका लागि हितकर मानिदैन ।
आल्मुनियमले शरीरका विकारलाई सजिलै हटाउँछ । तर, यसको बढी प्रयोग भने घातक बन्छ । यसको बढी प्रयोगले अल्मराइजबाट पीडित मानिसको ब्रेन टिस्युमा आल्मुनियमको मात्रा बढ्छ । अनुसन्धानले भनेको छ कि आल्मुनियमले दिमागको विकासलाई प्रभावित तुल्याउँछ ।
हाडको समस्याबाट ग्रसित मानिसका लागि पनि आल्मुनियम घातक बन्छ । यो हाडको समस्या थप बल्झाउने कारक बन्छ । विश्व स्वास्थ्य संघको रिपोर्टअनुसार प्याकिङ गरेको आल्मुनियमको फाइलबाट खानामा आवश्यकभन्दा बढी आल्मुनियम सर्छ ।
मसलेदार खानाले त भारी मात्रामा आल्मुनियम ग्रहण गर्छ । जुन खानाको प्रयोग मानिसका लागि हानिकारक साबित हुन्छ । यदि खाना राख्न वा खानालाई न्यानो गराउन आल्मुनियमको डब्बा प्रयोग गर्नुभएको छ भने त्यसको सट्टा काँचको भाँडा प्रयोग गर्न विज्ञ सुझाउँछन्।
यदि आल्मुनियमको फाइलमा बाध्यतावश खाना प्याक गर्नुपरेमा चिसो मात्र गर्नुपर्छ, त्यो पनि निकै कम समयका लागि। खाना जति बढी मसलेदार छ, त्यति नै बढी आल्मुनियम ग्रहण गर्छ। खाना न्यानो बनाउनका लागि बजारमा विभिन्न थरीका आल्मुनियम डब्बा उपलब्ध छन्। त्यस्ता डब्बाको माथिपट्टि खानालाई खराब हुनबाट रोक्ने वस्तु राखिएको हुन्छ । पटक–पटक भाँडा सफा गर्दा त्यस्तो वस्तुको गुण पनि नष्ट हुँदै जान्छ ।
साकाहारी भोजन गर्नुस्, दीर्घ जीवन जिउनुस् !
महत्वपूर्ण मानिने आयुर्वेदिक औषधी उखुको जुस पिउनुको यस्तो छ अचुक फाइदा
© Copyright 2022 laltin khabar. All rights reserved.